Gasy aho fa contre ny famorana et recherhe correspondants du meme avis - Dinika forum.serasera.org
Gasy aho fa contre ny famorana et recherhe correspondants du meme avis
Fitohizan'ny hafatra : Gasy aho fa contre ny famorana et recherhe correspondants du meme avis
ericruj - 09/05/2016 16:02
hery - 09/05/2016 18:20
Miala tsiny fa raha mbola mamerimberina lahatsoratra iray mitovy eto ianao dia hosakanana.
Apetraho ao amin'ny ssokajyazonao antoka ny lahatsoratra dia azonao aparitaka hitadiavana valiny.
vahiny2004 - 11/05/2016 09:55
Toa kabary tsy azo valiana izy ity nefa alefa eto an-tokotanibe ?
malagasy miavaka - 06/11/2016 22:02
Tsara kokoa ianao raha mandalina mikasika ny hoe FAMORANA sy ny hoe Malagasy, mialohan'ny hanaovanao fitongilanana. Mahafinaritra ny diniky ny samy Mpahalala; miohatra amin'ny Be tora-po mifampitafa.
Mazotoa mandalina ry Sakaiza